Hindiya - BBC News Somali
Saddexda Kahan ayaa ka mid ah jilayaasha loogu jecelyahay Hindiya, taageerayaashoodana waxaa kamid ah Soomaali badan
18 Maajo 2019
Sidee Sonkortu u saameysaa doorashada ugu weyn dunida?
Ra'isal wasaaraha hindiiya ayaa mar dhaw waxaa uu kulan olole doorasho ah ku qabtay qobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Uttar Pradesh, hase ahaate waxaa lagu qasabay in uu galo balan ku saabsan sonkorta taas oo ah kamid wax soo saarka ugu muhiimsan dalkaasi.
10 Maajo 2019
Jilaaga caanka ah ee Akshay Kumar oo dhalashadiisa lagu muransan yahay
Akshay Kumar ayaa kasoo muuqday in ka badan 100 filim
5 Maajo 2019
Zakir Naik oo dacwad lagaga soo oogay Hindiya
Dacwad oogeyaal reer Hindiya ah ayaa wadaadka dadka wacdiya ee Zakir Naik ku soo oogay dacwado la xiriira lacago sharci darro ah.
3 Maajo 2019
Wareysigii dhex-maray jilaaga caanka ah ee Akshay Kumar iyo Ra'iisul wasaaraha Hindiya
Akshay Kumar ayaa ka mid ah jileyaasha ugu caansan dalka Hindiya
24 Abriil 2019
Maxay tahay sababta jilaaga caanka ah ee Sunny Deol uu ugu biiray siyaasadda?
Sunny Doel ayaa jilay filimo xasuus ku yeeshay dad ay ka mid yihiin Soomaalida
Siddee ayuu ninkan 24 jeer doorasho ugu guul daraystay?
Musharraxiinta madaxa bannaan ayaa inta badan caqabado la kulma
22 Abriil 2019
Maxay tahay sababta uu u guursan la'yahay jilaaga caanka ah ee Salman Khan?
Jilaagan ayaa kasoo muuqday inkabadan boqol Filim oo uu dhaqaale badan ka sameeyay
Walaac soo wajahay jilaaga caanka ah ee Shahrukh Khan
Shahrukh Khan oo sidoo kale loo yaqaano "Boqor Khan" ayaa caan ku ah jilista aflaanta Hindiga ee qisooyinka jaceylka ku saleysan
19 Abriil 2019
Nin farta iska jaray markii uu u codeeyay xisbi khaldan
Ninkan ayaa si kama' ah ugu codeeyay xisbi aan ahayn kii uu taageersanaa
Haddii ay kugu adag tahay inaad lacag keydsato xal ayaa laguu helay
Qof kasta oo ay ku adagtahay inuu lacag dhitaystaa wuxu farsamo ka barankaraa muruq maalka ka shaqaysta miyiga India.
17 Abriil 2019
Jeceylka dadka kala diimaha ah miyaa kala fogeynaya dadka Hindiya?
Xili xagjirnimada diimeed iyo dumarka loo laayo si loo ilaaliyo sharafta qoyska ay aad ugu badan tahay dooddaha siyaasadeed iyo arrimaha bulsho ee dalka Hindiya, ayaa haddana arrimaha jeceylka iyo guurka dhexmara dadka kala diimaha ah waxay tahay arrin xasaasi ah.
Dhoollo tuska habka dimuquraaddiyadeed ee ugu wayn caalamka oo Hindiya ka dhacaya
Dhoollo tuska hannaanka dimuquraaddiyadeed ee ugu wayn dunida ayaa toddobaadkan soconayey ayadoo doorashooyinka dalka Hndiya ay bilaabanayaan, doorashadan ayaa bilaaban doonta maalinta khamiista ah ee 11-ka April.
Maxaad kala socotaa Filimka gilgilay siyaasadda Hindiya?
Filimkan ayaa duufaan siyaasadeed ku noqday Hindiya
8 Abriil 2019
Dhacdooyinka waawayn ee dunida laga filayo
Waa maalin cusub oo Isniin ah, in badan oo dalalka caalamka ka mid ahna toddobaadku maanta ayuu u billawday, inkastoo aanaan iska dhigayn in aan naqaanno wax kaste oo dhici doona toddobada maalmood ee soo socda, haddana waxaan sawir idinka siinaynaa waxyaabaha la filan karo.
Hindiya oo qorshaynaysa "in ay duulaan ku qaaddo Pakistan"
Dawladda Pakistan ayaa sheegtay in ay heshay "xog sirdoon oo lagu kalsoonaan karo" oo sheegaysa in Hindiya ay qorshaynayso in ay weerar milatari ku soo qaaddo toddobaadkan, balse Hindiya ayaa arrintaas waxba kama jiraan ku tilmaantay, waxayna sheegtay "in Pakistan ay qabto cabsi dagaal oo xad dhaaf ah".
Qarixii ay Hindiya ka sameysay hawada sare oo laga soo saaray qeylo dhaan cusub
Waxaa sii kordheysa halista uu qaraxan galinayo dunida
Sababta aysan dadka hodanka ah ee Hindiya u bixinin lacagtooda
Iyada oo uu ballan-qaadkiisii ugu dambeeyay uu gaarayo $ 7.5bn, Mr Premji's wadarta guud ee deeqaha uu bixiyay hadda waxay maraysaa 1.45tn rupees ($ 21bn; £ 15.8bn). taas macnaheeda waa in uu hal kaalin kula jiro dadka aduunka ugu wax bixinta badan- sida Bill iyo Melinda Gates, iyo Warren Buffet.
2 Abriil 2019
Ra'iisulwasaaraha Hindiya oo gabar kasoo badbaadiyay Soomaaliya
Narendra Modi oo ah Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya ayaa ka qayb qaatay howlgal lagu soo badbaadiyay haweeney iyo carruurteeda
Maxaad ka taqaan atooraha caanka ah ee xirfaddii uu ku haminayay ka habaabay?
Atoorahan wuxuu sheegay in jilista Filimada aysan ahayn xirfaddii uu hiigsan jiray
29 Maarso 2019
Dunida ma ka jiraa madaxweyne oggol in madaxweynayaal kale garab yaacaan?
Kiiska Caaisha: Ma laga yaabaa in ay rag baxsadeen?
Gabadh u sameysay gabdhaha Soomaaliyeed naadi nacfi u leh
Mustafe Cagjar oo sheegay hadal ka dhan ah Liyu booliska
Hoggaamiyeyaashii Al-Shabaab ee shalay miyay dowladdu kala dooratay?